Nhau - Taura nefekitori yepasirose-fekitori Manitowoc uye mutaure nezveramangwana pamwechete!
Mangwanani aGunyana 3, VaLei Wang, Mutevedzeri Wemutungamiri weManitowoc Tower Machinery Bhizinesi Inosimukira Misika uye Mutungamiri weChina Dunhu, nebato rake vakakokwa kuti vashanyire Nyasha.
Iwo mapato maviri aive neakadzika uye anofarira kuchinjana pane dzakaonda kugadzirwa mukugadzira kwepamberi, zvemhando yepamusoro manejimendi, kusimudzira kwechigadzirwa uye kusimudzira tarenda.
Semutungamiri mu crane indasitiri yepasirese, VaWang vakapa sumo yakajeka kune Manitowoc yekuonda kwekugadzira maitiro. Makore matatu apfuura, China shongwe crane indasitiri yaive ichiri muzasi yekukwira nhanho. Pasi pemamiriro ezvinhu akaoma uye pasi pesimba rekumuka kwemaChinese maBrand, harisi basa riri nyore kuunzira rakapererwa zita renyika munzira chaiyo.
Kune Manitowoc, shanduko mumakore matatu apfuura hadzisi nyore. VaWang, avo vane ruzivo rwekutsvaga mikana mumamiriro ezvinhu anowirirana, vanoedza kwazvo kugadzirisa. Zvichienderana neManitowoc's yepasirose-yakakosha yekugadzira base-Zhangjiagang Fekitori, akatungamira rake rakabudirira bhizinesi uzivi munguva yakapfuura, kusanganisira zvakashata zviitiko zvinosanganisira vese vashandi, uye nevatengi zvinodiwa. Iyo chigadzirwa dhizaini yekuvandudza yekambani yakakurumidza kuitwa muManitowoc, uye ikabatanidzwa pamwe neAsia-Pacific dunhu nemusika weChina. Makore matatu apfuura akawana mibairo inoshamisa.
Implementation, inotarisa pane zvakadzama uye zvepamusoro-pasi zvinoonda zviitiko zvevashandi vese, kwete chete zvinomutsa simba rakanaka revashandi, asi zvakare kukurudzira danho neshungu. Yakaunganidzwa zvishoma zvechiitiko uye iyo crystallization yevashandi 'huchenjeri, yakawedzera zvimwe zvirevo maererano neyakagadzirwa maitiro, kugadzirwa maitiro, maturusi uye zvishandiso zvehungwaru uye zvoga fekitori muZhangjiagang. Izvo zvakaonda zviitiko zvakaitwa mufekitori yeZhangjiagang mumakore achangopfuura zvakaita kuti Manitowoc Potain inyatso kuwana mabhenefiti kubva kufekitori. Kudzora kwemhando yepamusoro, kugadzirwa kwekugadzirwa, kuburitswa munzvimbo yeyuniti, uye mitengo yekugadzira yakagadziridzwa ichienderera mberi.
Achiomerera kumweya wemhizha we "kuve wakanakisa", Nyasha anoenderera mberi nekudzidza kubva mukuwana kwemakambani epasi rese, kuvandudza kunopfuurira, kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinobudirira uye masevhisi inzira yakajeka yekuti Nyaradzo avandudze. "Sanganisai mazana enzizi muindasitiri yegungwa, fungai mberi uye muwane ramangwana."